🥇 ▷ FIFA 20 waxay kuu ogolaaneysaa inaad tababareyaal ku abuurto Xirfadda 'Career Mode' ✅
FIFA 20 waxay kuu ogolaaneysaa inaad tababareyaal ku abuurto Xirfadda ‘Career Mode’
Waxaa ka mid ah wararka lagu shaaciyay qaabka shaqo ee FIFA, waxaa macquul ah in la abuuro tababarayaal, iyo sidoo kale horumarinno kale.
EA waxay ku dhawaaqday tiro taxane ah oo war ah iyo isbeddelo ah oo ku saabsan Xirfadda Shaqada loogu talagalay FIFA 20. Ka dib markii qoraallo badan oo modu ku dhowaad aynan shaqeyneyn, ugu dambeyntii wax ka beddello ayaa la sameeyay, kuwaas oo ay suurtogal ka tahay abuurista tababarayaal.
Markii ugu horeysay ee FIFA, iyo ciyaar kasta, the Qaabka shaqada ayaa u oggolaanaya ciyaartoydu inay abuuraan lab iyo dheddig avatars tababarayaasha. Sidaad ogtahay, waad badali kartaa nooca jirka, codka maqaarka, dharka iyo qaabka timaha ee tababbaraha ama tababbaraha, sidoo kale u qalabee qalabka.
FIFA 16 waxay soo bandhigtay kooxaha haweenka ee heer qaran, in kasta oo taxanahan aan wali lagu soo darin kooxaha haweenka ee naadiyada haweenka ama ciyaartoydooda Kooxda Ultimate FIFA. Laakiin si kastaba ha ahaatee, FIFA 20 waxay noo oggolaaneysaa inaan helno kooxo isku dhafan, oo loo maro habka cusub Volta (nooc nooc modality ah) FIFA Waddo-qaab).
(Sawirka: EA Sports)
Dhanka kale, FIFA 20 Career Mode hadda waxay ku lug leedahay maareynta niyadda. Tan waxaad ku samayn kartaa adoo wareejinaya 11-ka bilawgaaga, maaraynta himilooyinka mushaharka iyo xulashada yoolalka wareejinta. EA waxay sheegaysaa in xulasho kasta oo aan sameyso ay saameyn ku yeelan doonto niyadda kooxda, qaabkeeda iyo xitaa aqoonteeda guud.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira shirar jaraa’id oo cusub oo is-dhexgal ah, ka hor iyo ka dib daqiiqadaha ugu muhiimsan ee xilli-ciyaareedka, oo aad u adeegsan karto inaad ku dhiirrigeliso kooxdaada. Waxaan la yeelan karnaa wada sheekeysi shaqsi ah ciyaartoyda si aan ugala hadalno waxa ay ka walwalaan oo ay xalliyaan dhibaatooyinkooda, taas oo gacan ka geysanaysa sii wadida heerka kooxdaada inay sare u kacdo iyo u qalmitaanka tababaraheena.
Dhammaan waxay rabaan inay ka dhigaan qaabkan cusub inay dareemaan firfircoon, oo leh nolol dheeraad ah. Waxaad ka aqrisan kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan horumarkan FIFA 20 ee bartaada